प्याजको बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? यस्ता छन्, ६ वटा अचूक फाइदा
रोचक प्याजको बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? यस्ता छन्, ६ वटा अचूक फाइदा
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: प्याजको बोक्रा फालेर तरकारी वा अचारमा प्रयोग गर्दै आइरहनुभएको छ होला । तर गलत गर्नुभयो । किनकी प्याजको बोक्रा फाल्नु भनेको धेरै कुरा फाल्नु हो । कुनै कुनै तरकारीका बोक्रा कामै नलाग्ने हुन्छन । तर प्याज यस्तो तरकारी हो जसको बोक्राको उपयोग धेरै हुन्छ ।
के-के छन प्याजका बोक्राका फाइदा ?
हेयर कन्डिसनरको रुपमा प्रयोगः
नुहाउने बेला कपाललाई राम्रोसँग धुनुहोस् र त्यसपनि प्याजको बोक्रा भएको पानीले केही बेर सफा गर्नुहोस् । यसले कपाल एकदम चम्किलो र नरम हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोल कम गर्न सहयोगीः
प्याजको बोक्राले शरिरको कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई पनि कम गर्न सहयोग गर्दछ । यसका लागि पनि रातभरी प्याजको बोक्रालाई पानीमा भिजाउनुहोस् र दैनिक त्यो पानी पिउनुहोस् । यदि तपाईंलाई प्याजको स्वाद आउने पानी मन परेको छैन भने त्यसमा चीनि वा मह मिसाएर खानुहोस् ।
पेटको संक्रमणबाट बचाउः
प्याजको बोक्रामा एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुण हुन्छ जसले पेटमा हुने संक्रमणमा आराम दिलाउँछ । यसका लागि पनि प्याजको बोक्रालाई पानीमा भिजाउनुहोस् र दैनिक त्यो पानीको सेवन गर्नुहोस् । यदि तपाईंको डाक्टरले संक्रमणबाट बच्ने औषधी दिएका छन भने पनि ती औषधीसँग प्याजको बोक्राको पानी पनि सेवन गर्नुहोस् । यसले चाँडै नै आराम मिल्छ ।
प्याजको बोक्रामा एन्टी अक्सिडेन्टको मात्रा अत्यधिक हुन्छ र यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण पनि हुन्छ । यसका साथै प्याजमा पाइने ‘क्वेरसेटिन’ नामक एन्जाइमले क्यान्सर कोसिकालाई बढ्नबाट रोक्छ । तपाईं यी प्याजको बोक्राको चिया पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र दैनिक सुत्नुभन्दा अघि उक्त चियाको सेवन गर्नुहोस् ।
एन्टी इन्फ्लामेटरी गुणः
यदि तपाईंको छालामा कुनै प्रकारको एलर्जी भयो भने तपाईं प्याजको बोक्रा र पानीको प्रयोगले राहत पाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि प्याजको बोक्रालाई रातभरी एक कचौरा पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र बिहान त्यो पानीले आफ्नो छाला सफा गर्नुहोस् ।
किरा, लामखुट्टेबाट राहतः
यदि तपाईंको घरमा अत्यधिक किरा फट्याङ्ग्रा वा लामखुट्टेको प्रकोप धेरै नै छ र यसबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईं प्याजको बोक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि पनि प्याजको बोक्रालाई रातभरी पानीमा भिजाउनुहोस् र त्यो पानीलाई झ्याल, ढोका नजिकै राख्नुहोस् । त्यसको गन्धले लामखुट्टे र किरा फट्याङ्ग्रा घरमा आउँदैनन ।
१० लाईनहरु, जसले जिन्दगीको तितो सत्यलाई झल्काउछ:
१. जसले तिमी सामु अरुको कुरा काटिरहेको हुन्छ, त्यतिनै बेला तिमी यो पक्का हुनु कि उसले अरुको अगाडी पनि तिम्रो कुरा काटिरहेको हुन्छ ।
२. दुनियाको हरेक चिज ठक्कर खाएर टुट्ने गर्छ तर एउटा सफलता मात्र यस्तो चीज हो जुन ठक्कर खाएर मात्र मिल्ने गर्छ ।
३. समझदार बन्नु छ भने अरुको गल्ती बाट सिक, यदि आफैमाथी प्रयोग गर्न थाल्यौ भने त तिम्रो पुरै जिन्दगी पनि कम हुनेछ ।
४. लड्नु छ भने आफ्नै कमजोरी संग लड, अरुसंग होइन किनकि सफलता आफैमाथी गरिने प्रयासले मिल्ने हो, अरुको हारले होइन ।
५. कुनै पनि गल्ती मान्छेले दुइ पटक गर्न सक्दैन र यदि गर्छ भने त्यो उसको गल्ती होइन उसको इच्छा हो भनेर बुझ्नु ।
६. एक मिनेटमा जीवन बदलिदैन तर एक मिनेटमा लिएको निर्णयले तिम्रो पुरै जीवन बदलिन सक्छ, त्यसैले कुनै पनि निर्णय हतारमा नलिनु ।
७. जसरि रातले चन्द्रमालाई चम्किन सिकाउछ त्यसैगरी दुख र संघर्षले मान्छेलाई बुझ्न सिकाउछ ।
८. सधै त्यो मान्छेहरु संग नबस जसले तिमीलाई खुशी पार्ने गर्छन्, कहिले काही ति मान्छेहरु संग पनि बस जसले तिमीलाई पाएर खुशी हुने गर्छन् ।
९. आशु झरेको बेला हातको दश औला भन्दा त्यो एउटा औला खास हुन्छ जसले आशु पुछ्ने गर्छ, त्यसैगरी सफलतामा ताली बजाउने हजारौ हातहरु भन्दा दुखको बेला साथ् दिएको त्यो एउटा हात नै खास हुन्छ ।
१०. एउटा सानो कमिलाले तिम्रो खुट्टामा टोक्न सक्छ तर तिमीले कमिलाको खुट्टामा टोक्न सक्दैनौ । त्यसैले जीवनमा कसैलाई पनि सानो नसम्झनु किनकि हुनसक्छ जुन काम तिमी गर्न सक्दैनौ त्यो अरु कसैले गर्न सक्छ होला ।
छतमाथि तुलसीलाई राख्ने गर्नुभएको छ ? यो दिशामा फर्काउनुहोस् चम्किन्छ भाग्य
घरमा राखिएको बस्तुको शुभ, अशुभ दिशा बताइने गरिन्छ। कुनै पनि बस्तु सही दिशामा राख्दा वास्तुदोष हट्ने तथा भाग्य चम्किने विश्वास गरिन्छ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माले घरमा राखिने बस्तुका बारेमा सही दिशा बताएका छन् ।
झुक्किएर पनि गर्नै नहुने यी १० कार्यहरु पूजा गर्दा, अन्यथा परिवारमा भारी संकट
सुखी र समृद्ध जीवनको लागि देवी-देवताहरुको पूजा गर्ने परम्परा लामो समय देखी चलिआएको छ। आज पनि धेरै मानिसहरु यो परम्परामा अधिक विश्वास गर्दछन्।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४९७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६९ हजार ३०१ पुगेको छ ।
ब्रेकअप भयो ? यी ८ तरिकाले सहजै भूल्न सकिन्छ पूर्व प्रेमी-प्रेमिकालाई...